God is with us - Fiangonan'izao tontolo izao Soisa Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-01 > Andriamanitra dia miaraka amintsika
Ao aorianantsika ny vanim-potoanan'ny Krismasy. Toy ny zavona, ny famantarana rehetra amin'ny krismasy dia hanjavona ao amin'ny gazety, ny fahitalavitra, amin'ny varavarankely fivarotana, eny an-dalana ary ao an-trano.
Angamba efa naheno ny fitenenana ianao hoe: "Ny Krismasy dia miseho indray mandeha isan-taona" Vaovao momba ny Krismasy dia vaovao tsara avy amin'Andriamani- tra izay tsy vitan'ny tonga indraindray, toy ny nataony tamin'ny mponin'Israely. Tantara momba an'i Immanuel, "Andriamanitra miaraka amintsika" - izay misy foana.
Rehefa milatsaka amin’ny lafiny rehetra ny tafio-drivotra eo amin’ny fiainana, dia sarotra ny mahatsapa fa momba antsika Andriamanitra. Mety ho tsapantsika fa matory Andriamanitra, toy ny tamin’i Jesosy teo an-tsambokely niaraka tamin’ny mpianany: “Ary niondrana an-tsambokely Izy, ary ny mpianany nanaraka Azy. Ary, indro, nisy tafio-drivotra mafy tamin'ny farihy, ka efa voasaron'ny alon-drano koa ny sambokely. Natory anefa izy. Ary nanatona Azy izy ireo, dia namoha Azy ka nanao hoe: Tompoko, vonjeo, fa maty izahay! (Matio 8,23- iray).
Nisy tafio-drivotra tamin’ny fotoana nanambarana ny nahaterahan’i Jesosy. Efa nisy nanafika an’i Jerosalema: “Nambara tamin’ny taranak’i Davida hoe: Mitoby any Efraima ny Syriana. Dia nangovitra ny fony sy ny fon’ny olony, tahaka ny hazo any an’ala mangovitra eo anoloan’ny tafio-drivotra” (Isaia 7,2). Hitan’Andriamanitra fa raiki-tahotra indrindra i Ahaza Mpanjaka sy ny vahoakany. Koa naniraka an’i Isaia izy mba hilaza amin’ny mpanjaka hoe aza matahotra, satria tsy hahomby ny fahavalony. Sahala amin’ny ankamaroantsika amin’ny toe-javatra tahaka izao, dia tsy nino i Ahaza Mpanjaka. Naniraka an’i Isaia indray Andriamanitra nanao hoe: “Mangataha famantarana amin’i Jehovah Andriamanitrao [mba hanaporofoana fa handringana ny fahavalonao Aho], na any amin’ny lalina, na any ambony, na any amin’ny avo!” (Isaia 7,10-11). Menatra ny mpanjaka hanandrana ny andriamaniny tamin’ny fangatahana famantarana. Izany no nilazan’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Isaia hoe: “Izany no antony hanomezan’i Jehovah famantarana anareo: Indro, mitoe-jaza ny virijina ka hiteraka zazalahy, izay hataony hoe Imanoela.” ( Isaia. 7,14). Mba hanaporofoana fa hanafaka azy ireo Izy, dia nomen’Andriamanitra ny famantarana ny fahaterahan’i Kristy, izay hantsoina hoe Imanoela.
Ny tantara Krismasy dia tokony hampahatsiahy antsika isan'andro fa Andriamanitra dia momba antsika. Na dia mihalefaka aza ny tarehin-javatra, na dia very ny asanao aza, na dia olona maty aza no maty, na dia tsy nahomby tamin'ny làlanao aza, na dia nandao anao aza ny vadinao - miaraka aminao Andriamanitra.
Tsy maninona izay maty ny toe-javatra iainananao, Andriamanitra mipetraka ao aminao ary mamelona ny fiainanao izy. "Mino izany ve ianao"? Talohan'ny nanomboana an'i Jesosy tamin'ny niverenany tany an-danitra, dia nanjary niahy be ihany ny mpianany satria tsy ho eo aminy intsony. Hoy i Jesosy taminy:
“Fa noho ny nilazako izany taminao, dia feno alahelo ny fonao. Fa Izaho milaza ny marina aminareo: tsara ho anareo ny fialàko. Fa raha tsy miala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra. Fa raha handeha Aho, dia hirahiko ho atỳ aminareo izy » (Jaona 16,6 -8e). Izany Mpampionona izany dia ny Fanahy Masina izay mitoetra ao anatinao. “Raha ny fanahin’izay nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia Izay nanangana an’i Kristy tamin’ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin’ny Fanahiny, izay mitoetra ao anatinareo” (Romana). 8,11).
Andriamanitra momba anao mandrakariva. Enga anie ianao hiaina ny fanatrehan'i Jesosy anio sy mandrakizay!